Johani 16 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
16 “Ndataura zvinhu izvi kwamuri kuti murege kugumburwa.+ 2 Vanhu vachakudzingai musinagogi.+ Chokwadi, awa iri kuuya apo munhu wose anokuurayai achafunga kuti aitira Mwari basa dzvene.+ 3 Asi vachaita zvinhu izvi nokuti havana kusvika pakuziva Baba kana zvimwe ini.+ 4 Kunyange zvakadaro, ndataura zvinhu izvi kwamuri kuti, panosvika awa yazvo, muyeuke kuti ndakakuudzai izvozvo.+ “Zvisinei, handina kukuudzai zvinhu izvi pakutanga, nokuti ndakanga ndinemi. 5 Asi zvino ndiri kuenda kuna iye akandituma,+ asi hapana kana mumwe wenyu ari kundibvunza kuti, ‘Muri kuenda kupi?’ 6 Asi nokuti ndataura zvinhu izvi kwamuri mwoyo yenyu yazadzwa neshungu.+ 7 Kunyange zvakadaro, ndiri kukuudzai chokwadi, Zvakakunakirai kuti ndiri kuenda. Nokuti kana ndikasaenda, mubatsiri+ haangambouyi kwamuri; asi kana ndikaenda, ndichamutumira kwamuri. 8 Iyeye paanosvika, achapa nyika uchapupu hwechokwadi pamusoro pechivi nepamusoro pokururama nepamusoro pokutonga:+ 9 kutanga, pamusoro pechivi,+ nokuti havasi kutenda mandiri;+ 10 uye pamusoro pokururama,+ nokuti ndiri kuenda kuna Baba uye hamuchazondionizve; 11 uyewo pamusoro pokutonga,+ nokuti mutongi wenyika ino atongwa.+ 12 “Ndichiine zvinhu zvizhinji zvokutaura nemi, asi hamukwanisi kuzvinzwisisa panguva ino.+ 13 Zvisinei, panosvika iyeye, iwo mudzimu wechokwadi,+ achakutungamirirai muchokwadi chose, nokuti haazotauri zvake pachake, asi iye achataura zvinhu zvaanonzwa, uye achakuzivisai zvinhu zvinouya.+ 14 Iyeye achandikudza,+ nokuti achagamuchira kubva pazvinhu zvangu uye achazvizivisa kwamuri.+ 15 Zvinhu zvose izvo Baba vanazvo ndezvangu.+ Ndokusaka ndati iye anogamuchira kubva pazvinhu zvangu ozvizivisa kwamuri. 16 Munguva duku hamuchazondionizve,+ uye, zvakare, munguva duku muchandiona.” 17 Naizvozvo vamwe vevadzidzi vake vakataurirana vachiti: “Izvi zvinorevei zvaari kutaura kwatiri achiti, ‘Munguva duku hamuzondioni, uye, zvakare, munguva duku muchandiona,’ uye, ‘nokuti ndiri kuenda kuna Baba’?” 18 Nokudaro vakanga voti: “Izvi zvinorevei zvaari kuti, ‘munguva duku’? Hatizivi zvaari kutaura.” 19 Jesu akaziva+ kuti vakanga vachida kumubvunza, naizvozvo akati kwavari: “Muri kubvunzana pamusoro peizvi here, nokuti ndati, Munguva duku hamuzondioni, uye, zvakare, munguva duku muchandiona? 20 Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Muchachema nokuungudza, asi nyika ichafara; muchashungurudzwa,+ asi shungu dzenyu dzichachinjwa kuva mufaro.+ 21 Mukadzi, paanenge achisununguka, anonzwa shungu, nokuti awa yake inenge yasvika;+ asi kana asununguka mwana muduku, haachayeuki kutambudzika kwacho nokuda kwomufaro wokuti munhu aberekwa panyika. 22 Naizvozvo, imiwo, chokwadi, muri kuva neshungu zvino; asi ndichakuonaizve uye mwoyo yenyu ichafara,+ uye hapana achakutorerai mufaro wenyu. 23 Pazuva iroro+ hamuzombondibvunzi mubvunzo. Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Kana mukakumbira Baba chimwe chinhu+ vachakupai muzita rangu.+ 24 Kusvikira panguva ino hamuna kumbokumbira chinhu chimwe chete muzita rangu. Kumbirai uye muchagamuchira, kuti mufaro wenyu uzadziswe.+ 25 “Ndataura zvinhu izvi kwamuri nemienzaniso.+ Awa iri kuuya pandisingazotauri kwamuri nemienzaniso, asi ndichakuudzai pachena pamusoro paBaba. 26 Pazuva iroro muchakumbira muzita rangu, uye handitauri kwamuri kuti ndichazokukumbirirai kuna Baba. 27 Nokuti Baba vanokudai kwazvo, nokuti mave muchindida+ kwazvo uye makatenda kuti ndakauya somumiririri waBaba.+ 28 Ndakabva kuna Baba ndikauya munyika. Uyezve, ndiri kubva munyika uye ndiri kuenda kuna Baba.”+ 29 Vadzidzi vake vakati: “Hamuonika! Iye zvino mava kutaura pachena, uye hamusi kutaura nomuenzaniso. 30 Iye zvino tava kuziva kuti munoziva zvinhu zvose+ uye hapana chikonzero chokuti munhu akubvunzei.+ Nokuda kweizvi tinotenda kuti makabva kuna Mwari.”+ 31 Jesu akavapindura kuti: “Panguva ino mava kutenda here? 32 Tarirai! Awa iri kuuya, chokwadi, yatouya, pamuchapararira mumwe nomumwe kumba kwake+ uye muchandisiya ndiri ndoga; asi handisi ndoga, nokuti Baba vaneni.+ 33 Ndataura zvinhu izvi kwamuri kuti muve norugare nokwandiri.+ Munyika munotambudzika, asi shingai! Ini ndakunda nyika.”+